स्वास्थ्यकर्मीलाई ५०% जोखिम भत्ता दिइने — Imandarmedia.com
काठमाडौ। पिसिआर परीक्षण शुल्क घटाइयो, अब सरकारी प्रयोगशालामा आठ सय र निजीमा एक हजार पाँच सय स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिइने भएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिएपछि उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम भत्ता दिने तयारी गरेको हो।
यसअघि नै ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन महिनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ निर्णय गर्नु नपर्ने स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेलले बताए ।
तेस्रो लहरको सुरुवातमै धेरै स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाको चपेटामा परेका छन्। तर, अघिल्ला लहरमा संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष खटिएका सबै स्वास्थ्यकर्मीले घोषणा भएको जोखिम भत्तासमेत अझै पाएका छैनन्।
उनीहरूमध्ये केहीको पहिलो लहरकै र धेरैको दोस्रो लहरमा खटिएको भत्ता नपाएको गुनासो छ। सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले ओमिक्रोनले धेरै नागरिकलाई घेराबन्दीमा पारिसकेको बताए।
‘पुसमा पानी परेको थियो, अत्यधिक चिसो बढेकाले धेरै मानिस रुघाखोकीले ग्रस्त भएका थिए। त्यही समयमा ओमिक्रोनले अधिकांश मानिसलाई घेराबन्दीमा पारिसकेको देखियो, उनले भने।
चिकित्सकहरूका अनुसार छिटो फैलिने र रुघाखोकीकै रूपमा आएकाले मान्छेले कोरोना भएको भन्ने मेसो नै पाएनन्। छोटो समयमा धेरै स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित भएका छन्।
तेस्रो लहर सुरुको अढाई साताको अवधिमै पाँच सयभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ। जनशक्ति अभाव हुने देखेर अस्पतालहरूले गम्भीर अवस्था नभएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवामा फर्कन अनुरोध गरेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मी घरमा बस्दा अस्पतालमा बिरामी अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको भन्दै अस्पतालले एन्टिजेन मात्रै पजिटिभ आएको खण्डमा काममा आउन आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले पनि यस्तो अनुरोध गरेको छ।
मुख्यगरी काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी ठूलो संख्यामा प्रभावित भएका छन्। करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना नगरे सेवा रोकिने अवस्थामा पुग्न सक्ने चिकित्सकहरूको गुनासो छ। कोरोना संक्रमित भर्ना हुने शिक्षण अस्पताल, वीर, पाटन, प्रसूतिगृहलगायत अस्पतालमा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्।
पिसिआर शुल्क घट्यो: कोरोना पत्ता लगाउन गरिने आरटी–पिसिआर परीक्षण शुल्क घटाइएको छ। किटको मूल्य बजारमा सस्तो हुँदा पनि परीक्षणको शुल्क दुई हजारभन्दा कम नभएकाले त्यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानेको स्वास्थ्यसचिव डा. पोखरेलले बताए।
सरकारी प्रयोगशालामा गरिने शुल्क आठ सयमा झारिएको छ भने निजीमा एक हजार पाँच सय तोकिएको छ । यसअघि सरकारीमा हजार र निजीमा दुई हजार तोकिएको थियो । सरकारले निजी प्रयोगशालाको शुल्क पनि हजारमा झार्ने बताएको थियो
तर, निजी क्षेत्रको दबाबपछि १५ सय कायम गरिएको हो । यसमा निजी क्षेत्रले पनि सहमति दिएका छन् । अधिकारीहरूले बताएअनुसार हाल पाँच सयमा पिसिआर परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर ११ हजार तीन सय ५२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । यो संख्या एकैदिन देखिएको सबैभन्दा धेरै हो । २३ हजार चार सय नौ नमुना परीक्षण गर्दा यति धेरै संख्यामा पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो २४ घन्टामा चारजनाको मृत्यु भएको छ भने एक लाख ९५ हजार चार सय २२ जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।उपत्यकाका १० अस्पतालमा ६३८ संक्रमित : जनरल वार्डमा २३५, एचडियूमा ३२६, आइसियूमा ६२ र भेन्टिलेटरमा १५ जना
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालको आइसियूमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी। सो वार्डमा तीन संक्रमित उपचाररत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार टेकु अस्पतालमै पाँच संक्रमित एचडियू र एकजना भेन्टिलेटरमा छन्।
वीर अस्पतालमा ९८ संक्रमित उपचाररत छन् जसमध्ये ५९ जनरल वार्ड, २४ एचडियू, १३ आइसियू र दुईजना भेन्टिलेटरमा छन् ।शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचाररत ४५ संक्रमितमध्ये २१ जनरल वार्ड, १५ एचडियू, आठ आइसियू र एकजना भेन्टिलेटरमा छन्।
पाटन अस्पतालमा ९६ संक्रमित उपचारमा छन् जसमध्ये ४३ जनरल वार्ड, ३४ एचडियू, १२ आइसियू र सातजना भेन्टिलेटरमा छन्। सिभिल अस्पतालमा उपचाररत २४ संक्रमितमध्ये दुई जनरल वार्ड, १९ एचडियू र तीनजना आइसियूमा छन्।
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा ८४ जना एचडियू र दुईजना आइसियूमा छन् । सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा २० जना जनरल वार्ड, ८६ एचडियू, सात आइसियू र दुईजना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा २३ जना जनरल वार्डमा छन् भने ५४ जना एचडियू र ११ आइसियूमा छन्।
भक्तपुर अस्पतालमा पाँचजना एचडियू, तीनजना आइसियू र दुईजना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। नेसनल आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरको जनरल वार्डमा ६७ संक्रमित छन्। धुलिखेल अस्पतालमा भने हाल कोरोनाका कुनै बिरामी भर्ना भएका छैनन्।